नासपाती - एक फल, जनसंख्याको लगभग सबै खण्डहरूमा मा एक मनपर्ने, उत्कृष्ट स्वाद बाहेक, उपयोगी गुण को एउटा ठूलो छ।
नासपाती: यस्तो स्वादिष्ट र उपयोगी
यसको संरचना फाइबर, भिटामिन, जैविक एसिड, क्याल्सियम, आयोडिन, तामा, फास्फोरस र अन्य खनिज मा निहित प्रतिरक्षा को बलियो बनाउँछ योगदान, restorative गुण छ। यस्तो फल, को हृदय प्रणालीमा सकारात्मक प्रभाव छ सुधार रगत, पोत पर्खाल reinforces antipyretic गतिविधि possesses। बच्चाहरु र वयस्क द्वारा प्रेम छन् नाशपाती खाने, पाचन प्रणालीमा सकारात्मक प्रभाव, को अन्तस्करणले, कलेजो र थैली बढावा, यो toxins हटाउन मद्दत गर्छ। र सुकेको र ताजा फल, यी possessing antipyretic र antitussive कार्य, सर्दी लड्न मदत। सुगन्धित फल उज्ज्वल प्रतिनिधि नासपाती Veles छ।
Veles को किसिम को विवरण
पार प्रजातिहरू वन सौन्दर्य र भेनस को परिणाम सुन्तला रंग सतह संग सुगन्धित greenish-पहेंलो फल को गाढा हरियो पत्ते विरुद्ध खडा गर्दैन द्वारा विशेषता छ। , चिल्लो नासपाती Velesa चिल्लो सतह संग, एक औसत वजन 150 ग्राम छ, ठूलो नमूनों मा - 200 ग्राम: माली यो क्रमबद्ध को लाभ सराहना गरेका छन्। फल को फारम - नासपाती-विस्तृत, धेरै बाङ्गो, लामो, मध्यम मोटाई को स्टेम। नासपाती Veles अमिलो-मीठा, रसदार-नरम, मलाईदार, polumaslyanistoy मज्जा मध्यम घनत्व संग को विविधता स्वाद। यो केवल आफ्नो मुखमा पिघलने।
Veles - नासपाती शरद ऋतु पकने। काठ एक फैलाउने मुकुट, मध्यम मोटाई, लामो बाङ्गो शाखा द्वारा गठन द्वारा विशेषता छ। बढ्दै नासपाती को प्रक्रिया मा Vélez shirokopiramidalnuyu फारम हुन्छ। बाक्लो, मध्यम, रातो-खैरो शुट। पातहरु, चिल्लो मध्यम आकारको, वेभी मार्जिन serrulate हुनुहुन्छ। डंठल पातलो र लामो, lanceolate stipules छ।
जब बाली गर्न?
बाली काट्ने अगस्ट छ - प्रारम्भिक सेप्टेम्बर। प्रकृतिका साथ छ नासपाती पकने - Veles। तर सबै भन्दा ठूलो नमूनों संग शुरू खान फल दुई चरणमा सिफारिस गरिएको छ (अगस्ट र मध्य-सेप्टेम्बर को अन्त)। पूर्णतया जंगल Veles को संभावना आकलन गर्न अनुभवी माली को राय,, यो फल एक सानो greenish र अपरिपक्व बांधन गर्न मनमोहक छ; यो आफ्नो दीर्घकालीन भण्डारण निर्धारण गर्नेछ। तपाईं आफ्नो पूर्ण परिपक्वता सम्म रूख मा नाशपाती छोड्न सक्नुहुन्छ, तर यो एकदम आफ्नो भण्डारण जीवन कम गर्नेछ। नासपाती प्रजातिहरू नगण्य बेफाइदा Velesa melchaniyu फल गर्न झुकाव छ। यो कारण विशेष प्रशस्त harvests र पुरानो रूखहरू मा छाँट्ने लागि उपाय कमी हो।
मूल्य Veles ग्रेड
शरद ऋतु नासपाती Velez धेरै स्वादिष्ट ताजा; यो स्वादिष्ट बरकरार, जाम र compotes लागि ठूलो आधार हो। यो किसिम को रूखहरू फल 5-7 वर्ष मा रोपण पछि सहन थालेका छन्। अनुभवी माली को राय मा Veles को किसिम, को फाइदा नियमित प्रशस्त बाली र फल को उच्च व्यावसायिक गुणवत्ता छन्। काठ तुसारो गर्न एक उच्च प्रतिरोध र फंगल छ। नासपाती Veles, स्वाद र सकारात्मक छन् र यो अन्य प्रजातिहरू देखि भेद जो फल को उत्पादन गुणस्तर को उपभोक्ता समीक्षा, अत्यधिक निजी घरपरिवारमा माली द्वारा र औद्योगिक मात्रा मा मूल्यवान छ।
अवतरण अवस्था Veles नाशपाती
Veles को नासपाती प्रजातिहरू, उर्वर, राम्रो-भोकमरी soils मा रोपण लागि सिफारिस गरिएको छ किनभने राम्रो भूमि - भविष्यमा harvests लागि आधार। यो रूख जरा लागि एक आदर्श वातावरण छ बालुवा उत्पादक तह, उपस्थिति द्वारा सिफारिस गरिएको। माटो र स्थिर पानी सतहमा भूमिगत को काठ निकटता लागि Contraindicated। त्यहाँ क्षेत्रमा बाढी को एक संभावना छ भने, यो आवश्यक पनि बोट को जल सुनिश्चित गर्न, अन्यथा उत्तरार्द्ध Rot र मर्न सुरु हुनेछ छ।
Veles नाशपाती भूमि एक ठाउँ सूर्य गरेको रेज फल र आफ्नो मात्रा को चीनी सामग्री सकारात्मक प्रभाव पार्न किनभने, राम्ररी रोशनी चयन गर्न आवश्यक छ। यो सबै भन्दा राम्रो हुन सक्छ खुला क्षेत्र हुँदैन, एक रूख रोपेर गर्न frosts देखि सुरक्षा र चिसो हावा भेदी गर्न नेतृत्व जो बगैचा अन्य बिरुवाहरु बीच वा घर नजिकै।
इष्टतम अवधि बिरुवा लिन, बढ्न र पहिलो चिसो अघि बल पाउन सक्षम, वसन्त रोपण छ। रोपण प्वाल शरद ऋतु मा digging, अग्रिम तयार गर्नुपर्छ। रूख शरद ऋतु मा बस्छन भने, यो, कम्तिमा तीन हप्ता पहिले एक प्वाल खन्नुहोस् यसलाई जैविक मल (धरण वा धरण), superphosphate वा काठ खरानी राख्न मनमोहक छ। भविष्यमा, fertilizing बिरुवाहरु सालाना सिफारिश गरिन्छ।
रोपण जब बिरुवा मूल कलर 5-7 सेमी मा जमीन माथि उठन पर्छ। रूख रोपण को पहिलो वर्ष मा सबै भन्दा राम्रो अस्तित्व दर लागि सबै वा लगभग सबै फूल कटौती गर्न सिफारिस गरिएको छ। पछि आवश्यक क्रप छानिने आधा "zelenushek" (गठन को प्रारम्भिक चरणमा एक फल) अन्तर्गत अझै स्थित। यस कार्यका normalization बाली फल भनिन्छ ठूलो आकार को गठन गराउँछ र सबै भन्दा राम्रो जाडो अवधिको लागि युवा रूखहरू तयार।
सुविधाहरू हेरविचार नासपाती
टीन नासपाती Veles पानी 1 बाल्टिन को एक परिपक्व रूख दरमा, एक महिना 4-5 पटक सिफारिस गरिएको। अगस्ट, fruiting अवधि र अर्को वर्ष बाली फारम कि फूल तन्तु एक बुकमार्क संग साथ निरन्तर - यो जुलाई मा अधिकतम चिस्यान बोट सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण छ। यो अवधिमा चिस्यान को कमी हालको वर्ष र अर्को वर्ष बाली भविष्य को हानि गर्न सक्छ। अगस्ट - सिंचाई को अन्तिम महिना, पानी पछि लामो मार को गठन र विकास निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ, र यो धेरै धेरै अग्रिम चिसो अगाडि बोट कमजोर छ। पानी, सूखी वर्ष सामान्य भन्दा अब को लागि जारी गर्न सकिन्छ इष्टतम चिस्यान काठ सुनिश्चित को उद्देश्य संग। कुनै पनि अवस्थामा, समायोजन टीन मौसम सुविधाहरू संग तुलना गर्नुपर्छ।
हेरविचार को एक महत्वपूर्ण तत्व रूपमा ट्रिम
नासपाती Veles (फोटो मनपर्ने प्रजातिहरू माली को आकर्षण र सौन्दर्य conveys) - संस्कृति चिसो तथापि, पछिल्लो रूख संरक्षण गर्न एक सर्कल वरिपरि-ट्रंक र bole न्यानो पहिरन सामाग्री मा गीली गर्न सिफारिस गरिएको छ।
रूख चड्डी सामा हटाउन र त्यहाँ कुनै बिरुवाहरु छन् रोपेर एक समसामयिक तरिका क्रममा राख्न आवश्यक छ।
नासपाती, कुनै पनि साथ रूपमा बगैचा रूख छाँट्ने, उद्देश्य जो फल, पुरानो विरामीहरु र शाखा, मुकुट र स्वतन्त्रता रोग देखि को गठन हटाउन को उपज र चिनी सामग्री वृद्धि छ। सामान्यतया, यो नासपाती कटौती छ यो कली सम्म, वसन्त को शुरुवात - थप स्याउ रूख, यो लागि इष्टतम अवधि भन्दा। जवान बिरुवा रोपण समयमा उत्पादन पहिलो बाली, जो शाखा तेस्रो द्वारा छोटो हुनुपर्छ। यो मुकुट बिछाउने लागि राम्रो सुरुवात विन्दु हुनेछ।
ट्रिम शाखा को कुल ठूलो को एक चौथाई भन्दा कुनै थप हुनुपर्छ। मार पूर्ण हटाइएका छन्, कुनै स्टम्पहरू छोडेर आधार मा काटेर गर्नुपर्छ।
नासपाती Veles - मनपर्ने ब्रान्ड
Veles - नासपाती, बगैचा जायदाद मा खेती को लागि सिफारिस गरिएको छ जो। आफ्नो नाजुक नम्र स्वाद संग सुगन्धित उच्च गुणवत्ता फल तिनीहरूलाई बीच एक प्रयास देखि indifferent जो कोहीले छोड्न छैन। रूख हेरविचार जटिल छैन, तर यो पनि एक विशाल मास्को मा बढ्दै उद्देश्य र वरपरको क्षेत्रमा यो फल दुर्लभ उदाहरणका उत्पन्न प्रजनकों एन वी Efimovoy र यू। ए Petrovym प्राप्त गर्न, कि प्लस छ।
प्रतियोगी ग्रेड खीरे। ककडी प्रतियोगी: समीक्षा, फोटो
Kochia - बीउ र उचित हेरविचार को बढ्दै।
फिल्म "भन्दा सुरु गर्नुहोस्। मार्ता ": अभिनेता समस्याको बारेमा सोच्न बाध्य
किन Swallow (सपना व्याख्या) को सपना?
"यस Sims 3" मा बदमासी: को जाच्ने र काटछाट गर्ने कोड र अन्य विधिहरू हटाउन कसरी
आफ्नो हातमा कुकुर lounger सी